Iindaba ezi-7 zokuhlela ngoSeptemba. I-Biography, i-comic, inoveli ... | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | I-Biography, IiComics, Iincwadi, Inoveli, Inoveli emnyama
Ukufika NgoSeptemba kwaye kunye nayo ekwindla lisondela, ixesha elilungileyo Iindaba zokuhlela. Kwaye oku akuyi kuba kuncinci. Yiya apho esi-7 yezo zinto zintsha zisayinwe ngababhali bamanye amazwe kwinqanaba le UJames Ellroy okanye uStephen King, kunye noosolusapho bathanda ILuz Gabás kunye neAlaitz Leceaga. Ukuchukumisa udidi kwaye ezinye zigcwele Iindaba zikamabonwakude. Kwaye enye ngobomi bakhe malunga UThixo okanye iSlow Hand, ezenzelwe loo nto ziyafana.
1 UMax, 20-uSalva Rubio kunye noRubén del Rincón
2 UClapton -Ukuzenzekelayo
3 Esi saqhwithi-uJames Ellroy
4 Iziko-uStephen King
5 IChernobyl 01:23:40 - UAndrew Leatherbarrow
6 Ukubetha kwentliziyo yomhlaba-iLuz Gabás
7 Iintombi zomhlaba - Alaitz Leceaga
UMax, ama-20 -USalva Rubio kunye noRubén del Rincón
Ukusuka kuArturo Pérez-Reverte sinezinto ezimbini ezintsha ngoSeptemba. Usuku 18 iyaqhubeka nokuthengisa Sidi, inoveli malunga nomfanekiso I-Cid. Kodwa ngaphambili, I-10, Le comic ipapashwe ethatha UMax Costa, ophambili kwenye yeencwadi zakhe, Itango likanogada omdala, ukuyibeka kwibali lasekuqaleni. Ityikityiwe Umdwebi wekhathuni uRubén del Rincón kunye Umbhali wesikrini uSalva Rubio kwaye sisihloko sokuqala kuthotho.
IClapton -Umxholo wobhalo lomntu
Kuninzi okubhaliweyo ngo-Eric Clapton, kodwa wayesele eyidlala le nto ngobomi bakhe. UClapton ngomnye weemvumi eziphambili zeli xesha, a Isalathiso kwindalo iphela kwimbali yamatye kunye neblues. Nangona kunjalo, un Umntu ogcinwe kakhulu kunye nobomi obunzima baphawule ubukho babo ngeendlela ezijikelezayo utywala neziyobisi. Yonke le nto yaphelela kwintlekele yokuphulukana nonyana.
Ingaba lonto yi uhambo lomntu nolomculo yintoni ngoku ene isitayile kakhulu vala kwaye obusondeleyo. Kwaye abo kuthi ngokungathandabuzekiyo bayayithanda le ntsomi yekatala bajonge ukuyifunda.
Esi saqhwithi -UJames Ellroy
Ibuyisa i Inja ekrwada, I-icon yoncwadi olumnyama noluntsonkothileyo eMelika. Esi sihloko ipapashwa ngomhla we-5 kwaye oku kulandelayo Okwesibini LA Quartet kwaye iyaqhubeka iyelenqe le Ukucoceka ngeenyanga zokuqala ze 1942. Ifresco entsha ngaphezulu kweLos Angeles, Isixeko esikhohlakeleyo esingapheliyo kunye nendalo eyodwa kaEllroy apho omnye wabona bantu babalaseleyo kuncwadi lwabantsundu, uDudley Smith, eqhubeka nokuzula ngokukhululekileyo.
Iziko - uStephen King
Okulandelayo kupapashwa usuku 12 kwaye sele beyiqwalasele njengokubuyela kweyona Kumkani ilungileyo yezihloko ezinje Amehlo Omlilo, It o noCarrie. Usixelela ibali lenkwenkwe eneminyaka elishumi elinambini, ULuka ellis, abathunjiweyo emva kokubulala abazali babo.
Xa evuka ukwi Iziko elibi elibizwa ngokuba liZiko. Baninzi abantwana apho kwaye bonke bayabelana ubuchule obukhethekileyo obufana netelekinesis okanye ubuchwephesha bokubhala bathathe ithuba ngoNksk. Sigsby, inqununu, kunye nabanye abasebenzi. Inqaku lelokuba abantwana bayanyamalala kwaye uLuka uxakeke kukubaleka acele uncedo. Kodwa akukho namnye umntu owakha wasinda kweli ziko.
IChernobyl 01:23:40 - UAndrew Leatherbarrow
Kwakubonwa kwangaphambili ukuba esi sihloko siza kuphuma apho ngokusekwe kuthotho lwe-HBO kamabonakude. Inkqubo ye- usuku 16, nangona ukupapashwa kwayo okokuqala kwakungo-2016. Ibalisa ibali lentlekele yenyukliya eyabhalwa ngumlobi emva kwayo iminyaka emihlanu yophando, uhambo kunye nodliwanondlebe abalinganiswa abaphambili.
Ukubetha kwentliziyo yomhlaba -Luz Gabás
Iphuma phakathi ku-Septemba kwaye ngokutsho kombhali, «emva Imithi yesundu kwikhephu, Ukubetha kwentliziyo yomhlaba es Eyona ncwadana yam isuka entliziyweni». Ke sinebali elitsha ukuthanda, ukuthanda, ukuthembeka kunye neemvakalelo ifunyenwe.
Umntu ophambili kuye UAlira, Ilifa lendlu yendlu kunye nemihlaba yosapho lwayo kodwa oqhekekileyo phakathi kokunyaniseka kwimvelaphi yakhe okanye ukuziqhelanisa namaxesha amatsha. Kodwa inye ukunyamalala okumangalisayo kunye nokuqhwanyaza kweliso Baya kumnyanzela ukuba ajongane nexesha lakhe elidlulileyo kwaye babuze imigaqo yakhe.
Zintombi zomhlaba -UAlaitz Leceaga
Ipapashwe ngomhla we-19 kwaye ixhaswa yimpumelelo ye Ihlathi liyalazi igama lakho. Ngoku sinayo Isaga yosapho isethelwe kwindawo yokugcina iwayini La Rioja. Kwaye kwakhona enye phambili kwabasetyhini ukulungele ukulwela amandla kunye a imfihlelo enkulu oko kuya kuvela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iindaba ezi-7 zokuhlela ngoSeptemba. I-Biography, i-comic, inoveli ...